China Walnut Peptide fekitori uye vanotengesa | Huayan
Walnut peptide idiki mamorekuru collagen peptide, inoburitswa kubva kune walnut neyakagadzirirwa bio-enzyme kugaya uye yakaderera tembiricha membrane kupatsanura tekinoroji. Walnut peptide ine zvirinani zvinovaka muviri, icho chitsva uye chakachengeteka chinoshanda mbishi zvinhu zvekudya.
Chinyorwa Chinyorwa: Walnut protein
Ruvara: Ichena kana yakajeka yero poda
Nyika: Upfu / granule
Technology Maitiro: Enzymatic hydrolysis
Kunhuwirira: Nezvakagadzirwa zvakasarudzika hwema uye kuravira
Molecular Kurema: 500-1000Dal
Iyo mbishi zvinhu zvakaburitswa kubva kumuti, zvakasikwa uye heathy pasina zvinowedzerwa, zvakapfuma mune akasiyana amino acids emuviri wemunhu.
Pasuru: 10KG / Bag, 1bag / atorwa, kana customized.
1 - Kuvandudza ndangariro;
2.Kudziridza ungwaru uye nekuvandudza kugona kudzidza;
3.Improve matambudziko ekurara;
4.Anti-oxidation yekudzivirira chirwere cheAlzheimer;
5.Improve yekugaya system uye kusimudzira kunwa kwehutano;
6.Assisted pakurapa kwemoyo uye cerebrovascular hosha;
7.Kuvandudza hutachiona hwevanhu;
Anti-cancer, inhibit kukura kwegomarara maseru
Inoshandiswa zvakanyanya muchikafu, cosmetic, mishonga uye mimwe minda.
Dhipatimendi reku manejimendi rekugadzira riine iro rekugadzira dhipatimendi uye musangano unoita iwo madhizaini ekugadzira, uye yega kiyi yekudzora poindi kubva mukutsva kwezvinhu zvekuchengetera, kuchengetedza, kudyisa, kugadzirwa, kupakata, kuongorora uye kugadzirisira kune yekugadzira maitiro manejimendi inotarisirwa uye inodzorwa neane ruzivo vane hunyanzvi vashandi uye vashandi ve manejimendi. Iyo yekugadzira fomula uye tekinoroji maitiro apfuura kuburikidza neyakaomeswa ongororo, uye chigadzirwa chigadzirwa chakanakisa uye chakatsiga.
2.First-kirasi michina, yakagadziridzwa mbishi michina uye epamberi tekinoroji, kambani inokoshesa kukosha kwehunhu kudzora uye manejimendi mune yese nzira yekugadzira, uye inovavarira kuwana zvakanakisa mune ese ma link kuona mhando yezvokupedzisira zvigadzirwa.
Kutsvaga kwezvinhu zvakasvibirira, tekinoroji yepamberi, yepamusoro pane zvinodiwa nemutemo, yakatsanangurwa chigadzirwa kupatsanurwa, kupa vatengi mhando yepamusoro uye yakachengeteka mbishi zvinhu.
Kuenderera mberi kwekugadzira kugona, inonzwisisika hesera, kupa vatengi zvigadzirwa zvakakwana.
5.Provide yakazara-nguva mushure-kutengesa masevhisi.
Peptide Chinyorwa Kwayakagadzirwa mbishi zvinhu Basa guru Yekushandisa munda
Walnut Peptide Walnut kudya Hutano hune hutano, kukurumidza kupora kubva pakuneta, kunyorovesa maitiro CHIKAFU CHINE UTANO
CHikafu CHisina Uturu
GANDA ROKUCHENGETESA MAZANO
Pea Peptide Pea Mapuroteni Kurudzira kukura kweprobiotic, anti-kupisa, uye kuwedzera hutachiona
Soy Peptide Soy Mapuroteni Dzorera kuneta,
anti-oxidation, yakaderera mafuta,
Spleen Polypeptide Mhou yemombe Kuvandudza mashandiro anoita maseru emunhu, kudzivirira uye kudzikamisa kuitika kwezvirwere zvekufema
Earthworm Peptide Earthworm Yakaoma Natsiridza kutapata, kuvandudza microcirculation, kuputsa thrombosis uye yakajeka thrombus, chengetedza midziyo yeropa
Murume Silkworm Pupa Peptide Hume silkworm pupa Dzivirira chiropa, kugadzirisa hutachiona, kukurudzira kukura, shuga shoma yeropa,
Nyoka Polypeptide Nyoka nhema Kuwedzera hutachiona,
Kugadzira Tekinoroji Maitiro:
Hove-kusuka-ganda uye kushambadza- enzymolysis - kupatsanura- kudzora uye deodorization-kwakanatswa kusefa- ultrafiltration- kusangana- kubereka- kupomesa kuomesa- kurongedza kwemukati- kutsva kwesimbi- kwekunze kurongedza- kuongorora- kuchengetedza
Bhurawuza rako haritsigire ma tag evhidhiyo.
Tora zvigadzirwa zvekugadzira zvemberi uye tekinoroji yekuperekedza kugadzirwa kwezvinhu zvekutanga-kirasi. Mutsetse wekugadzira unosanganisira yekuchenesa, enzymatic hydrolysis, kusefa uye kusimbisa, kupomesa kupopera, zvemukati nekunze kurongedza. Kuendeswa kwezvinhu nguva yese yekugadzira kunoitwa nemapombi kuti udzivise kusvibiswa kunoitwa nevanhu. Mativi ese emidziyo nemapombi anobata zvinhu zvakagadzirwa nesimbi isina chinhu, uye hapana mapaipi mapofu pamagumo akafa, ayo ari nyore kuchenesa uye disinfection.
Chigadzirwa Hunhu Management
Iyo yakazara-ruvara simbi dhizaini murabhoritari iri 1000 mativi metres, yakakamurwa munzvimbo dzakasiyana dzinoshanda senge microbiology kamuri, fizikisi uye kemesitiri imba, inorema kamuri, yakakwira greenhouse, chaiyo mudziyo mudziyo uye muyero kamuri. Yakashongedzerwa nemidziyo chaiyo senge yakakwira kuita chikamu chemvura, kunwa kweatomu, yakatetepa rukoko chromatography, nitrogen analyzer, uye mafuta analyzer Gadzira uye uvandudze iyo mhando manejimendi manejimendi, uye pasa CERTIFICATION yeFDA, MUI, HALA, ISO22000, IS09001, HACCP nemamwe masisitimu.
Pashure: Soybean Peptide
Zvadaro: Bovine Collagen Peptide